VALORANT Agents တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်များ | Codashop Blog MM
VALORANT Agents တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်များ
VALORANT ကတော့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ 5v5 နည်းဗျူဟာနဲ့ ပစ်ရတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပြီး စစ်သားတွေနေရာမှာ ကစားသူတစ်ယောက်ချင်းစီက “အေးဂျင့်” လို့ခေါ်တဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ ကစားလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အေးဂျင့်တစ်ယောက်ဆီတိုင်းမှာ သူမတူတဲ့စွမ်းရည်တွေနဲ့ ထူးခြားတဲ့ ကစားပုံတွေနဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ကစားဖို့ စိတ်တိုင်းကျထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အေးဂျင့်တွေကတော့ KAY/O, Astra, Yoru, Skye, Raze, Jett, Omen, Breach, Killjoy, Reyna, Cypher, Viper, Sova, Sage, Phoenix နဲ့ Brimstone တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အခြား FPS ဂိမ်းတွေလိုမျိုး VALORANT မှာလည်း သူ့အခန်းကဏ္ဍတွေရှိပါတယ်။ Initiators, Duelists, Sentinels နဲ့ Controllers တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Initiators တွေက intel စုဖို့ အာရုံစိုက်ရပါတယ်။
Duelists တွေက ရန်သူအသင်းနဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်ဖို့ တိုက်တွန်းပေးပါတယ်။ သူတို့က အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူးတွေပါ။
Sentinels တွေကတော့ အသင်းရဲ့ခုခံသူတွေဖြစ်ပြီး နောက်တန်းမှာကစားတာများပါတယ်။
Controllers ကတော့ အမြင်အာရုံတွေပိတ်တာနဲ့ အကူအညီပေးတဲ့နေရာမှာ အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။
အေးဂျင့်တိုင်းဟာ ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည် (၄)မျိုးရှိပါတယ် – – သမားရိုးကျစွမ်းရည်တွေကနေ တိုက်ပွဲအတွင်းမှာ နှာတစ်ဖျားပိုသာနိုင်စေဖို့ magical ပါဝါတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ အစထဲက သူတို့ရဲ့ လက်သုံးစွမ်းရည်ကိုသုံးပြီး အချိန်ခဏကြာတာနဲ့ သူတို့ရဲ့ ultimate စွမ်းရည်တွေတက်လာမှာပါ။ သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်တွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဒီဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီး ဘယ်သူ့ကို အရင်ရွေးရမလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
ဤဆောင်းပါးကိုလည်းဖတ်ပါ : ဇာတ်ကောင်များလေ ပိုပျော်စရာကောင်းလေ! VALORANT မှာ အေးဂျင့်အသစ်တွေ ဘယ်လိုရယူမလဲ
အခန်းကဏ္ဍ : Initiator
KAY/O ကတော့ သူ့ရဲ့ VALORANT ပွဲဦးထွက်ကို Episode3Act I မှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။ Initiator တစ်ယောက်အနေနဲ့ သူ့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်က radiants တွေကို ဖယ်ထုတ်ပစ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ war machine ကြီးကတော့ ရန်သူတွေရဲ့ အေးဂျင့်စွမ်းရည်တွေကို ပျက်ပြယ်စေပြီး ရန်သူတွေကို ဖိနှိပ်တာဖြစ်ပါတယ်။
Flash/drive: ပစ်လိုက်ပြီး တစ်ခဏအကြာမှာ ပေါက်တဲ့လက်ပစ်ဗုံးက အနီးနားမှာရှိတဲ့ သူတွေအကုန်လုံးကို မမြင်ရအောင်လုပ်တယ်။
Frag/ment: ပေါက်ကွဲစေတဲ့အရာကိုလွှဲပစ်ပြီး အဲဒီပစ္စည်းက မြေကြီးပေါ်မှာကပ်နေပြီး အကြိမ်များစွာ ဆက်လက်ပေါက်ကွဲကာ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်တိုင်းရဲ့ အလယ်ဗဟိုမှာ သေစေလောက်တဲ့ damage ထွက်စေပါတယ်။
Zero/point: ရန်သူတွေကိုနှိမ်နင်းမယ့်ဓားသွားကိုပစ်ပြီး ပထမဆုံးမျက်နှာပြင်ကို ထိတဲ့အခါ ဆောင့်ပြီးပေါက်ကွဲပြီးတော့ ပေါက်ကွဲခြင်းရဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးရဲ့ စွမ်းရည်တွေကို ဖိနှိပ်တယ်။
Ultimate စွမ်းရည် :
Null/cmd: အလင်းတွေဖြာထွက်တဲ့စွမ်းအားတွေဟာ KAY/O ကိုတစ်ဟုန်ထိုးပြည့်စုံစေပြီး သူ့ရဲ့တည်နေရာကနေ ကြီးမားတဲ့အင်အားတွေကို လွှတ်ထုတ်လိုက်တယ်။ ဒီအင်အားတွေနဲ့ထိမိတဲ့ ရန်သူတွေဟာ တစ်ခဏ စွမ်းရည်တွေ ဖိနှိပ်ခံရတယ်။
အခန်းကဏ္ဍ : Controller
Ghana ကလာတဲ့ အေးဂျင့် Astra ဟာ သူ့ရဲ့လက်ထဲမှာ စကြာဝဠာကို ဆုက်ကိုင်ထားပါတယ်။ Controller တစ်ယောက်အနေနဲ့ သူမမှာ နည်းဗျူဟာကြွယ်တဲ့ အမြင်အာရုံရှိပြီး သူ့ရဲ့ astra ပုံစံမှာ လုံးဝ ဩဇာအပြည့်နဲ့ပါ။ သူမကတော့ သူ့ရန်သူထက် အမြဲတမ်း ကမ္ဘာခြားပြီး သာလွန်နေတာပါပဲ။
Gravity Well: ကစားသူတွေကို ပေါက်ကွဲမယ့်အလယ်ဗဟိုကို ဆွဲသွင်းပြီး ကစားသူတွေအားလုံးကို ကြမ်းတမ်းတဲ့နေရာထဲမှာ ပိတ်မိနေစေပါတယ်။
Nova Pulse: အရမ်းပြင်းထန်တဲ့ ပြင်းအားတစ်ခုကိုဖြစ်စေပြီး အနီးအနားက ကစားသူတွေကို ဆွဲလှုပ်ပြီး လမ်းပျောက်စေပါတယ်။
Nebula/Dissipate: စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာတဲ့ မီးခိုးငွေ့တိမ်ဖြစ်စေတယ်။
Astral Form: Primary Fire ကို Stars နဲ့ အစားထိုးတယ်။ Stars တွေဟာ နောက်ပိုင်းမှ အသက်ပြန်သွင်းလို့ရပြီးတော့ Astra ရဲ့ စွမ်းရည်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါတယ်။
Cosmic Divide: မြေပုံကို နံရံကြီးတစ်ခုနဲ့ ထပ်ခြမ်းကွဲစေပြီး ကျည်ဆန်တွေကို ကာလိုက်ပြီး အသံလှိုင်းတွေကိုလည်း လျှော့ချလိုက်ပါတယ်။
Yoru က ဂျပန်ကလာတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ရန်သူတွေကို အပေါက်တွေကတစ်ဆင့် ထိုးဖောက်နိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ Duelist ဖြစ်တဲ့အတွက် ရန်သူတွေကို အတုအယောင်လုပ်ပြီး ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်နဲ့ နောက်တစ်နေရာကိုရွေ့သွားတဲ့နေရာမှာ အထူးကျွမ်းကျင်ပါတယ်။
Blindside: တခြားကမ္ဘာကလာတဲ့ မငြိမ်သက်တဲ့ အရာတစ်ခုကို ပစ်လိုက်ပြီး ရန်သူတွေ မမြင်အောင်လုပ်ပါတယ်။
Fakeout: ခြေသံအတုအယောင်တွေကို လွှင့်ထုတ်ပြီး ရန်သူတွေကို ရောထွေးစေပါတယ်။
Gatecrash: လံကြိုးတစ်ခုနဲ့ teleport တစ်ခုကို လံကြိုးဆွဲထားတဲ့နေရာအတိအကျကို တစ်အောင့်ကြာ လွှတ်ပေးထားတယ်။
Dimensional Rift: ကိုယ်ပျောက်ဖြစ်သွားပြီး အချိန်ခဏကြာ မဖြိုဖျက်နိုင်တဲ့အဆင့်ကို ရောက်သွားပါတယ်။
Skye ရဲ့ ဇာတိကတော့ Australia ကဖြစ်ပြီး သဘာဝကို ခုံမင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ သူက သူ့ရဲ့ သားရဲအုပ်စုကိုစေလွှတ်ပြီး ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ပြီး ရန်သူတွေဆီကပါ ခုခံကာကွယ်ပါသေးတယ်။ Skye က healing powers တွေကိုလည်း ရရှိထားပါသေးတယ်။
Regrowth: ဒီစွမ်းရည်ကတော့ Skye ကို သူ့ရဲ့ အနီးနားက အသင်းသားတွေနဲ့ သူမြင်ရတဲ့နေရာက အသင်းသားတွေကို heal လုပ်လို့ရအောင် လုပ်ပေးပါတယ်။
Trailblazer: ထွက်ပြီးတော့ သားရဲတိရစ္ဆာန်ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတယ်။ ကစားသူတွေဟာ ရှေ့ကို ခုန်ပြီး သားရဲကို ကိုင်တွယ်နေချိန်မှာလည်း ပေါက်ကွဲနိုင်ပါတယ်။
Guiding Light: သိမ်းငှက်လက်ဝတ်တန်ဆာကို ဝတ်ပြီး ထိန်းချုပ်ပါတယ်။ ကစားသူတွေဟာ ရန်သူတွေကို မမြင်ရစေတဲ့ မီးအလင်းရောင်တစ်ခုအသွင်ပြောင်းပြီး ပျံသန်းနေတဲ့ အချိန်မှာ ပြန်သုံးနိုင်ပါတယ်။
Seekers: Seekers ၃ယောက်ကိုလွှတ်ပြီး အနီးကပ်ဆုံး ရန်သူ ၃ယောက်ရဲ့ လမ်းကြောင်းကို စုံစမ်းပါတယ်။ Seeker တွေက သူတို့ရဲ့ ပစ်မှတ်ဆီကိုရောက်တဲ့အခါ အဝေးကိုမမြင်ရအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Brazil က Raze ကတော့ သူ့ရဲ့ ကြမ်းကြုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ သေနတ်အကြီးကြီးတွေနဲ့ ဆရာကြီးလုပ်နေတာပါ! သူမရဲ့ စွမ်းရည်တွေကတော့ damage ထုတ်တာနဲ့ အရေထူတဲ့ ရန်သူတွေကိုဆွဲထုတ်ဖို့ အဓိက အားဖြည့်ပေးထားပါတယ်။
Boom Bot: စက်ရုပ်အသေးလေးတစ်ကောင်ကို လွှတ်ထားပြီး သူက မြေကြီးပေါ်မှာ မျဉ်းတစ်ကြောင်းအတိုင်းအတည့်တိုင်းသွားပြီး နံရံတွေကိုလည်း ကျော်သွားတယ်။ သူ့ရဲ့ ရှေ့က ကတော့မှာလာညိတဲ့ရန်သူတွေကို lock လုပ်ပြီး သူတို့နောက်ကို လိုက်ပြီးတဲ့နောက် သူတို့ဆီရောက်တာနဲ့ damage ကြီးကြီးနဲ့ ပေါက်ကွဲပစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
Blast Pack: မျက်နှာပြင်တွေပေါ်မှာ ကပ်ပြီး ပြင်းပြင်းထန်ထန် ပေါက်ကွဲတတ်တဲ့ Blast Pack တွေကို ပစ်လိုက်ပြီးတော့ သူတို့ဟာ damage ထွက်ပြီး နောက်ကိုပြန်ဆောင့်တတ်ပါသေးတယ်။
Paint Shells: Damage ထွက်စေပြီး လက်နက်ပစ္စည်းအသေးလေးတွေလဲ ထွက်ပြီးတော့ အဲဒီပစ္စည်းတွေဟာ သူတို့အနီးနားမှာရှိတဲ့သူအားလုံးကို damage ပေးမယ့် လက်ပစ်ဗုံးကို ပစ်ပါတယ်။
Showstopper: Raze ကို အရမ်းကြီးမားပြီး ဧရိယာအကျယ်ကြီးကို damage ဖြစ်စေမယ့် ဒုံးပျံလောင်ချာနဲ့ တွဲပေးထားပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားကိုယ်စားပြု Jett ကတော့ သူ့ရဲ့ ဖိုက်တာ စတိုင်ကို ကူညီပေးဖို့ movement power ကို တွဲဖက်ထားပါတယ်။ သူက လေထဲမှာရှိနေချိန် အဆင်းကိုနှေးစေတဲ့ passive စွမ်းရည်ရှိတဲ့ အေးဂျင့်တွေထဲက တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Cloudburst: မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်မှာ အမြင်အာရုံကို ကွယ်စေမယ့် တိမ်တစ်ခုအဖြစ် ပွင့်လာမယ့် ကျည်ဖူးတစ်ခုကိုပစ်လွှတ်တယ်။
Updraft: လေထဲ အမြင့်ပေါ်ကို ချက်ချင်းတွန်းကန်တယ်။
Tailwind: Jett သွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲ သူ့ကို လေထဲကို တွန်းပို့ပေးလိုက်တယ်။ Jett က မတ်တပ်ပဲရပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ရှေ့ကို ရွေ့သွားမယ်။
Blade Storm: Jett ကို ရန်သူတစ်ယောက်ကို သတ်ပြီးရင် ပြန်ပြီးအားဖြည့်လို့ရတဲ့ အရမ်းတိကျတဲ့ဓားအစုံ ပေးထားတယ်။
ဒီအေးဂျင့်ကတော့ အရိပ်တွေထဲမှာ အမဲလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Omen က သူ့ရဲ့ ရန်သူတွေကို မမြင်ရအောင်လုပ်ပြီး တစ်ဘက်ခြမ်းကို teleport လုပ်လို့ရပါတယ်။ သူဟာ သနားစရာကောင်းတဲ့သားကောင်တွေကို ထိန်းချုပ်ပြီး အသုံးမဝင်တော့အောင် လုပ်နိုင်ပြီးတော့ သူဘယ်ကနေ နောက်တစ်ခါ တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိအောင်လုပ်ထားခဲ့နိုင်ပါတယ်။
Shrouded Step: သတ်မှတ်ထားတဲ့ တည်နေရာကို teleport လုပ်နိုင်တယ်။
Paranoia: အရိပ် ကျည်ဖူးကို ပစ်ပြီး ထိမိတဲ့ ကစားသူတွေအကုန်လုံးရဲ့ အမြင်အာရုံအကျယ်အဝန်းကို နည်းနည်းချင်းစီ လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
Dark Cover: အမြင်အာရုံကို ကွယ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ အကြာကြီးခံတဲ့ အရိပ်လုံးကြီး လွှတ်ထုတ်နိုင်အောင် Omen ကို လုပ်ပေးတဲ့ ခုခံကာကွယ်တဲ့ စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။
From the Shadows: နည်းဗျူဟာကြွယ်တဲ့ မြေပုံတစ်ခုပေးထားပြီး ကစားသူတွေကို VALORANT မြေပုံပေါ်မှာရှိတဲ့ နေရာမှန်သမျှကို teleport လုပ်နိုင်အောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်။
Sweden က လာတဲ့ ဒီလူကြီးကတော့ သူ့ရဲ့စွမ်းရည်တွေအားလုံးကို မြေပုံရဲ့ ဂျီဩမေတြီအရ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ထူးခြားတဲ့ စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။ သူဟာ လမ်းကြောင်းရှင်းဖို့အတွက်လည်း အရွေ့ပေါက်ကွဲမှုတွေကို လွှတ်နိုင်ပါသေးတယ်။ သွားမရှုပ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ။
Aftershock: နံရံကို ဖောက်ထွင်းဖို့ ဖြေးဖြေးလေးဓာတ်ပြုတတ်တဲ့ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အားတစ်ခုကို ထုတ်လွှတ်ပါတယ်။
Flashpoint: ပေါက်ကွဲမှုတွေကို ကြည့်မိတဲ့ ကစားသူတွေရဲ့ အမြင်ကို ကွယ်အောင်လုပ်ပါတယ် ( flashbang တစ်ခုအလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ တူပါတယ်)
Fault Line: နေရာတစ်ခု နဲ့ အဲဒီနေရာဆီကို သွားမယ့် လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ ကစားသူတွေအားလုံးကို ရပ်တန့်စေတဲ့ ငလျင်တစ်ခုကို လွှတ်လိုက်ပါတယ်။
Rolling Thunder: ငလျင်ကြောမိတဲ့သူအကုန်လုံးကို မူးဝေစေပြီး ရိုက်ခတ်မယ့် ငလျင်တစ်ခုကို လွှတ်ပါတယ်။
Killjoy ကတော့ Germany ကလာတဲ့ ဉာဏ်ကြီးရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူက သူကိုယ်တိုင်စုဆောင်းထားတဲ့ တီထွင်မှုတွေကိုအသုံးပြုပြီး ရန်သူတွေကို ချေမှုန်းပါတယ်။ သူမရဲ့ စက်ရုပ်ကတော့ ရန်ဖက်ကို မသန်စွမ်းတော့အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာ အရေးပါပါတယ်။
Alarmbot: ဒီ စက်က ခလုတ်ဖွင့်ပြီးရင် သူ့ရဲ့ နယ်ပယ်ထဲဝင်လာတဲ့ ရန်သူတွေကို damage ထုတ်တယ်။
Nanoswarm: နေရာတစ်ခုမှာ ပေါက်ကွဲတဲ့အခါမှာ ရန်သူတွေကို damage ထုတ်တဲ့ စက်ရုပ်လေးတွေအများကြီးစုထားတဲ့ လက်ပစ်ဗုံးတစ်လုံး တပ်ဆင်ထားတယ်။
Turret: ရန်သူတွေကို 180 ဒီဂရီ ကတော့ပုံထဲကနေ ပစ်တဲ့ တာဝါတိုင်တစ်ခု ထူထောင်နိုင်တယ်။
Lockdown: ပတ်လည်နေရာတစ်နေရာမှာ ဖမ်းမိတဲ့ ရန်သူတွေကို Lockdown လုပ်တဲ့ စက်တစ်ခု တည်ထောင်တယ်။
Reyna ကတော့ Mexico ကလာတဲ့ Duelist တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာလည်း သူမရဲ့ စွမ်းရည်တစ်ခုချင်းစီကို အမြတ်ထုတ်လို့ရမယ့် passive စွမ်းရည်ရှိပါတယ်။
Leer: လေပေါ်မှာ ဝဲနေတဲ့ ခရမ်းရောင်မျက်လုံးတစ်လုံးကို လွှတ်လိုက်ပြီး ကြည့်မိတဲ့သူတိုင်းကို အမြင်ကွယ်စေပါတယ်။
Devour: Reyna သတ်လိုက်တဲ့ရန်သူတွေဟာ ၃စက္ကန့်လောက်ကြာ Soul Orbs တွေကို ချန်ခဲ့ပါတယ်။ အနီးနားက soul orb တစ်ခုစားလိုက်မယ်ဆိုရင် အချိန်ခဏလေး အမြန် heal ပေးပါတယ်။ ဒီစွမ်းရည်ကနေ ရလာတဲ့ health တွေဟာ 100 ကျော်လာရင် အချိန်နဲ့အမျှ ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ Empress ရှိနေရင်တော့ ဒီစွမ်းရည်ဟာ အော်တိုဖွင့်ထားပြီးသားဖြစ်ပြီး orb ကိုစားမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Dismiss: အနီးနားက soul orb တစ်ခုစားလိုက်မယ်ဆိုရင် အချိန်ခဏကြာ ကိုယ်ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Empress ရှိသေးရင်တော့ သူပါ ကိုယ်ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Empress: Reyna ရဲ့ ပစ်နှုန်း တပ်ဆင်ခြင်းနဲ့ ကျည်ပြန်ထည့်နှုန်းတွေကို အများကြီးမြှင့်ပေးပါတယ်။
Cypher ကတော့ Morocco ကလာတဲ့ တစ်ကိုယ်တော် စောင့်ကြည့်ကွန်ယက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အတွက် intel က ရည်ရွယ်ချက်ဆိုရင်တော့ ဒီအေးဂျင့်ကိုပဲရွေးပါ။ သူ့မှာတော့ ချောင်ပိတ်တတ်တဲ့စွမ်းရည်နဲ့ သူ့ရဲ့ထောင်ချောက်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ ရန်သူတွေရဲ့တည်နေရာကို ထုတ်ဖော်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
Trapwire: ကစားသူတွေကို ပျက်စီးစေတဲ့အရာတွေ ချခိုင်းထားပြီး အဝင်နဲ့ အခြားတံခါးပေါက်တွေမှာ တိတ်တိတ်ပုန်း ခလုတ်တိုက်စေတဲ့ကြိုးတွေချထားပါတယ်။
Cyber Cage: Cypher ရဲ့ရှေ့မှာ ရန်သူတွေရဲ့အမြင်ကိုကွယ်စေပြီး ခလုတ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ ဖြတ်သွားတဲ့ ရန်သူတိုင်းကိုနှေးစေတဲ့ cyber cage တစ်လုံး ပစ်ချထားပါတယ်။
Spycam: ပစ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာ စပိုင်လုပ်တဲ့ ကင်မရာတစ်ခုတပ်ဆင်ထားပြီး ရန်သူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကို ခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။
Neutral Theft: ကိုယ့်ရဲ့ ပြောင်းချိန်တဲ့နေရာမှာ သေပြီးသားရန်သူကစားသမားတစ်ယောက်ကိုထည့်ထားပြီး ကျန်တဲ့ ရန်သူကစားသမားတွေအားလုံးရဲ့ တည်နေရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်တယ်။
Viper ကတော့ အဆိပ်ရှိတဲ့ ဓာတုစက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကစားမှုတွေကိုသုံးပြီး ရန်သူတွေကို အမြစ်ဖြတ်ချေမှုန်းတဲ့ အမေရိကန် ဓာတုဗေဒပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
Snake Bite: အဆိပ်ရှိတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေထုတ်လွှတ်တဲ့ကျည်ဖူးတစ်ခုပါတဲ့ ဓာတုလောင်ချာတစ်ခုတပ်ဆင်ထားပြီး မြေကြီးပေါ်မှာ လျှောက်သွားနေမှာပါ။
Poison Cloud: အမြင်အာရုံကိုကွယ်စေတဲ့ အဆိပ်ရှိတိမ်ဖြစ်လာအောင် ဂတ်စ်တွေထုတ်တဲ့ပစ္စည်းကို ပစ်လိုက်ပါတယ်။
Toxic Screen: အမြင်အာရုံကိုကွယ်စေတဲ့ အလွန်မြင့်တဲ့ အဆိပ်ရှိတဲ့ဂတ်စ်တွေ ဖြစ်လာအောင် ဂတ်စ်တွေထုတ်တဲ့ပစ္စည်းကို ပစ်လိုက်ပါတယ်။
Viper’s Pit: Viper အနားတစ်ဝိုက်ကို ဓာတုတိမ်ဖြစ်အောင် စပရေးဖြန်းလိုက်ပြီး အလွန်ကြီးတဲ့ တိမ်ကြီးဟာ သူ့ထဲက ရန်သူတွေရဲ့ အမြင်အာရုံအကျယ်နဲ့ အများဆုံး health ကို လျော့ကျစေပါတယ်။
ဒီ Russian Initiator ကတော့ နောက်ယောင်ခံခြင်းနဲ့ ရန်သူတွေကို ရှင်းတဲ့နေရာမှာတော့ အကြင်နာမဲ့စွာ အသုံးဝင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ လေး က ဘယ်သူမှ ပုန်းလို့မရအောင် လုပ်ထားပါတယ်။
Owl Drone: ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့ drone တစ်ခုကို လွှတ်တင်လိုက်ပြီး drone ဟာ မှတ်ထားတဲ့ မြားကိုပစ်လိုက်ရင် ရန်သူတွေကို ရှာဖွေပြီး အမှတ်အသားလုပ်နိုင်ပါတယ်။
Shock Bolt: လျှပ်စစ်လေးနဲ့မြားကိုသုံးပြီး ရန်သူတွေကို damage ဖြစ်အောင်လုပ်ပါတယ်။
Recon Bolt: ထောက်လှမ်းတဲ့မြားဟာ ထိမိတဲ့အခါမှာ အသက်ဝင်ပြီး မြားရဲ့ အမြင်အာရုံအနီးနားတစ်ဝိုက်က ရန်သူတွေရဲ့ တည်နေရာကို ရှာနိုင်ပါတယ်။
Hunter’s Fury: နံရံမှန်သမျှကိုဖောက်နိုင်တဲ့ အဝေးပစ် မြား ၃စင်းနဲ့ ရန်သူတွေကို သတ်တယ်။
တရုတ်ကလာတဲ့ Sage ကတော့ သူမအတွက်ရော အသင်းအတွက်ရော healing မှာ အထူးပြုတဲ့ Sentinel ဖြစ်ပါတယ်။ Sage က အသင်းကို စိတ်ငြိမ်အောင်လုပ်ပေးပြီး အာရုံပြန်စုစည်းနိုင်အောင် ကူညီပါတယ်။
Barrier Orb: အသင်းသားတွေကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး လမ်းတွေကို ပိတ်ဆို့နိုင်တဲ့ မာကျောတဲ့နံရံတစ်ခု တည်ဆောက်တယ်။
Slow Orb: နှေးစေတဲ့ orb တစ်ခုကို ရှေ့ကိုပစ်လိုက်ပြီး မြေပေါ်ကျတဲ့အခါ ပေါက်ကွဲသွားတယ် အထဲမှာရှိနေတဲ့ ရန်သူတွေကို ကြာရှည် နှေးစေတဲ့ ကွင်းပြင်ဖြစ်စေတယ်။
Healing Orb: Sage ကိုယ်တိုင်နဲ့ အသင်းသားတွေကို လိုအပ်ရင် heal လုပ်ပေးတယ်။
Resurrection: အသင်းသားတစ်ယောက်ကို health အပြည့်နဲ့ အသက်ပြန်ရှင်အောင် Sage က လုပ်ပေးနိုင်တယ်။
United Kingdom ဇာတိဖြစ်တဲ့ ဒီ duelist ကတော့ စစ်မြေပြင်ကို မီးတောက်ရဲ့ အစွမ်းကိုရထားပြီး မီးတောက်နဲ့ အစွမ်းအစတွေနဲ့ လောင်ကျွမ်းနေစေပါတယ်။ Phoenix ရဲ့ ပေါက်ကွဲစေတဲ့ fireballs တွေဟာ အလွန်များတဲ့ damage ဖြစ်စေပြီး သူ့ကိုတော့ ဖြစ်စဉ်မှာ heal ပေးပါတယ်။
Blaze: အမြင်ကွယ်စေပြီး ဖြတ်သွားတဲ့ ကစားသူတွေကို damage ဖြစ်စေတဲ့ မီးတောက်နံရံကြီး တည်ဆောက်ပါတယ်။
Curveball: (ဘယ် သို့မဟုတ် ညာ)ဘက်ကို ကွေ့သွားတဲ့ flare orb ကို ပစ်လွှတ်ပြီး ခဏအကြာမှာ ပေါက်ကွဲကာ မြင်တဲ့ကစားသူတိုင်းကို အမြင်ကွယ်စေပါတယ်။
Hot Hands: Phoenix က သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကြာရင် သို့မဟုတ် မြေကြီးကိုထိတဲ့အခါ ပေါက်ကွဲတဲ့ fireball ကို ပစ်လိုက်ပြီး ရန်သူတွေကို damage ဖြစ်စေတဲ့ မီးလောင်တဲ့ဇုန်ကို ကြာရှည်ဖြစ်စေပါတယ်။
Run It Back: Phoenix ရဲ့ တည်နေရာမှာ အမှတ်အသားတစ်ခုလုပ်ပါတယ်။ ဒီစွမ်းရည်ရှိနေသေးတဲ့အခါ သေတာ သို့မဟုတ် timer ကို ကုန်ဆုံးစေခြင်းဟာ ဒီ စွမ်းရည်ကို အဆုံးသတ်စေပြီး Phoenix ကို နဂိုနေရာကို full health နဲ့ ပြန်ခေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
United States က လာတဲ့ controller နဲ့ commander ဟာ သူနဲ့ သူ့ဘော်ဒါတွေဟာ တိုက်ပွဲမှာ အမြဲတမ်းအနိုင်ပိုင်းနိုင်တယ် အထူးသဖြင့် သူ့ရဲ့ လည်နေတဲ့ လက်နက်တိုက်ကြောင့်လို့ မြင်နေပါတယ်။
Incendiary: မီးလောင်စေတတ်တဲ့ပစ်ချက်တွေပါတဲ့ လက်ပစ်ဗုံးလောင်ချာ တပ်ဆင်ထားပြီး မီးလောင်တဲ့ ဇုန်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ရန်သူတွေကို ကြာရှည် damage ထုတ်ပေးနေပါတယ်။
Stim Beaconl: ကစားသူတွေကို RapidFire ပစ်လို့ရတဲ့ နေရာကို တည်ဆောက်ပေးတဲ့ နိုးကြွစေတဲ့ အချက်ပြမီးကို ဖော်ပြတယ်။
Sky Smoke: ပရိယာယ်ကြွယ်ဝတဲ့မြေပုံရှိပြီး Brimstone ကို ပစ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာမှာ ကြည့်လိုက်ရင် အမြင်ကွယ်စေမယ့် မီးခိုးတိမ် ၃ခု ဖြစ်စေမယ့် နေရာတွေကို သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
Orbital Strike: ပရိယာယ်ကြွယ်ဝတဲ့မြေပုံရှိပြီး Brimstone ကို ရွေးထားတဲ့နေရာမှာ လည်နေတဲ့ လေဆာတန်းကြီးကို ကြာရှည်ထားပြီး အဲဒီနေရာက ကစားသူတွေကို အချိန်နဲ့အမျှ damage တွေများလာစေတယ်။
Previous articleFast and the Furious ဇာတ်လိုက်တွေကသာ Free Fire ကားတွေကို မောင်းမယ်ဆိုရင်…